Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Technology » Cilmi-baarista sayniska ee Arctic, Style Ruush
Wararka Ururada • News • Dadka • Wararka Ruushka • Wakhtiga waarta • Technology
Kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee isku dubaridka cilmi baarista sayniska ee Arctic ayaa ka dhacay Moscow. Kulanka ayaa lagu qabtay qayb ka mid ah qorshaha dhacdooyinka waaweyn ee la xidhiidha Guddoomiyaha Ruushka ee Golaha Arctic ee 2021-2023, kaas oo ay maamusho Roscongress Foundation.
Munaasabadan oo uu gudoominayay Natalia Bocharova, Wasiir ku xigeenka Sayniska iyo Tacliinta Sare ee Ruushka, ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilo ka socda wadamada Arctic (Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden, iyo Maraykanka), Kooxaha Shaqada ee Golaha Arctic iyo Ururada Dadka asaliga ah ee Arctic, kuwaas oo ah ka-qaybgalayaasha joogtada ah ee Golaha Arctic.
"Gudoomiyaha Ruushka wuxuu higsanayaa inuu hagaajiyo hufnaanta hawlaha sayniska iyo ku-dhaqanka macquulka ah ee natiijooyinkooda Arctic. Waxaan dooneynaa inaan wanaajino isticmaalka kaabayaasha sayniska oo aan kor u qaadno isticmaalka tignoolajiyada horumarsan iyo hababka ugu wanaagsan ee hirgelinta mashaariicda wadajirka ah, "ayuu yiri Nikolai Korchunov, Safiirka-Large ee Iskaashiga Arctic ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka iyo Guddoomiyaha Golaha Arctic Saraakiisha Sare ee Arctic.
Sida laga soo xigtay isaga, mid ka mid ah goobaha iskaashiga sayniska ee latitudes sare wuxuu noqon karaa saldhigga caalamiga ah ee Arctic ee Snezhinka ee Yamal. Mashruuca, oo diiradda saaraya cilmi-baaris wadajir ah oo ku saabsan tamarta-ka-baxa kaarboonka, waxaa u gudbiyay Ruushka shirka Kooxda Horumarinta Joogtada ah ee Golaha Arctic ee 2019 waxaana taageeray dalalka Arctic.
Ka qaybgalayaashu waxay ka wada hadleen baahida loo qabo in la aqoonsado mudnaanta la wadaago ee cilmi-baarista Arctic, xoojinta iskaashiga cilmi-baarista caalamiga ah ee Arctic, qabashada tartan cilmiyeed wadajir ah oo loogu talagalay mashaariicda cilmi-baarista, iyo sidoo kale suurtogalnimada in la sameeyo Guddiga Isku-dubbaridka ee Hawlaha Sayniska Arctic iyo abuurista kayd cilmi-baaris caalami ah oo wadajir ah oo Arctic ah. wadamada.
Natiijooyinka doodaha ku saabsan hindisayaasha Ruushka ayaa lagu soo bandhigi doonaa shirka guud ee saraakiisha sarsare ee Arctic Council ee Dec. 1-2 ee Salekhard.